काठमाडौं- स्टामिना बलियो भएमा तपाईं घरिघरि रोग लाग्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ । आजकलको व्यस्त जीवनशैलीका कारण हाम्रो शरीरले सबै पोषक तत्त्व पाउँदैन जसकारण शरीर अनेकथरी रोगको समस्यामा पर्छ ।भित्रैबाट बलियो बन्न चाहनुुहुन्छ भने स्टामिना मजबूत बनाउनुस् । यसका लागि आयुर्वेदमा उल्लिखित केही सरल उपायहरू यहाँ बताइन्छ ।
यो प्राचीन औषधिले पूरै शरीरमा प्रभाव पार्छ । तनाव, कब्जियत र बाथरोगबाट पनि यसले मुक्ति दिन्छ । तनावका कारण तपाईं शरीरलाई स्वस्थ आहार दिनुहुन्न जसकारण स्टामिना कम हुन्छ । अश्वगन्धा खाँदा तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ र स्टामिना पनि बढाउन सक्नुहुन्छ ।
यसको रोगनाशक शक्तिले ग्यास र स्नायु प्रणालीमा सकारात्मक असर पार्छ । यो प्रयोग गर्दा स्टामिना बढ्छ र तपाईंभित्र आत्मविश्वास बढ्छ ।
ब्राह्मीमा भएका एन्टीअक्सिडेन्टहरूले स्टामिना बढाउन सहायता गर्छन् र तौल बढ्न रोक्छन् । यिनीहरूले शरीरका विषाक्त कुरा शरीरबाट निकालेर रक्तकोशिकाहरूलाई विकसित गर्छन् ।
प्राचीनकालदेखि नै शिलाजीतको प्रयोग स्टामिना बढाउनका लागि गरिँदै आएको छ । यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउँछ ।
यसबाहेक गोकशुरा, घिउकुमारी, नीम जस्ता आयुर्वेदिक औषधिले पनि स्टामिना बढाउन मद्दत गर्छन् ।
अनि केही अन्य खानेकुराले पनि स्टामिना बढाइदिन्छन्, जस्तै :
ओट्समा भारी मात्रामा ऊर्जा हुन्छ । दिनदिनै दूधका साथ ओट खाने गर्नुभयो भने शरीरको तागत र क्षमता बढ्छ ।
स्प्राउट्स अर्थात् टुसा पलाएका दानादुनीहरू खानुभयो भने पनि स्टामिना बढाउन सक्नुहुन्छ । टुसा पलाएको मुँगको दाल सबभन्दा बढी लाभदायक हुन्छ ।
तागत बढाउन र शरीरलाई बलियो बनाउन गाईको घिउ सेवन गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
पालुंगोको झोलले शरीरलाई आवश्यक सबै पोषक तत्त्व प्रदान गर्छ र ऊर्जा दिन्छ । यसमा भएको क्याल्सियमले स्टामिना बढाउन सहायता गर्छ ।
शरीरलाई ऊर्जा दिने सबभन्दा राम्रो स्रोत केरा पनि हो ।
आफ्नै शरीरसँग जोडिएका २० रोचक तथ्य बारे जानकार हु...
कोरोनाले कमजोर बनाएको शरीरमा यसरी ल्याउनुस् स्फुर्ति
राम्दी घाटमा २५ भन्दा बढी मलामी जम्मा हुन नपाइने
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले दर्ता गराए उम्मेदवारी
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन– सूर्य चिह्नबाट बादल, एमालेका खिमलाल कांग्रेस-माओवादीका साझा उम्मेदवार !
अनुष्का र विराटले कोरोना राहतका लागि दिए २ करोड
कूडाकर्कटलाई टिकट दिएकाले बंगालमा हार्‍यो भाजपा : तथागत रोय
मोदी एकोहोरो बोल्छन् मात्रै, कसैको सुन्दैनन् : झारखण्डका मुख्यमन्त्री
विरगञ्ज महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो सय बेड क्षमताको कोभिड अस्थायी अस्पताल
माधव नेपालपक्षीय डा. देवकोटाले गराए उम्मेदवारी दर्ता– माओवादी प्रस्तावक, कांग्रेस समर्थक !